tag ကို: technorati | Martech Zone
tag ကို: Technorati
ATTN - Social Media Application Developers
သောကြာနေ့, ဇွန်လ 25, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
တွစ်တာ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်။ LinkedIn ။ ငါ့ blog ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီ။ ဒါတွေအပြင်ကျွန်တော်မှာဂူဂဲလ်အကောင့်တစ်ခုရှိတယ်။ ငါ့မှာ gravatar အကောင့်ရှိတယ် ငါ့မှာ WordPress အကောင့်ရှိတယ်။ ငါမှာ Yahoo! အကောင့်။ ငါ Flickr ကိုရောက်နေတယ်။ အရသာ။ Technorati ။ Ning ။ ကြောင်းမတိုင်မီက MySpace ရှိခဲ့သည်။ နှင့် AOL ။ အဲ့ဒီတုန်းက Prodigy အကောင့်တောင်ရှိတယ်။ ဒီတော့ဒီမှာမေးခွန်းတွေဒီမှာ၊ ငါလုံးဝနေရာအနှံ့မှာရှိနေတဲ့အတွက်၊ ဘာဖြစ်လို့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာကြောင့်ငါ့ကိုမေးနေတာလဲ၊ မင်းရဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါ
Business for Blogging: ခွေးဟောင်းများအတွက်လှည့်ကွက်အသစ်များ
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 24, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
လူကြိုက်များမှုနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်တွင်ဘလော့ဂ်များ၏လွှမ်းမိုးမှုသည်မည်သူမျှငြင်း။ မရပါ။ ဘလော့ဂ်များ၏လူကြိုက်များမှုသည်ကွန်ယက်ပေါ်တွင် ပိုမို၍ ထင်ရှားပြတ်သားသော၊ ပို၍ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်။ စစ်မှန်သောဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းသစ်မှပေါ်ပေါက်လာသည်။ Technorati သည်တစ်နာရီလျှင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘလော့ဂ်များဖန်တီးနေသည့်အချိန်တွင်ဘလော့ဂ်ပေါင်း ၁၁၂.၈ သန်းကျော်ကိုခြေရာခံနေသည်။ WordPress၊ Blogger၊ Typepad နှင့် Vox တို့ကဲ့သို့ open source application များသည် blogging ကိုလွယ်ကူစေသည်။ ကုမ္ပဏီတိုင်းတွင်
ပိုကောင်းတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်မရှိပါ။ Feed Readers ၅၀၀!
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 18, 2007 တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2017 Douglas Karr
Content, Passion, Momentum …ဒါတွေဟာဘလော့ဂ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာငါဖောက်သည်တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အချက်သုံးချက်ပါ။ အချို့လူများက blogging သည် narcissistic ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဟုထင်မြင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် blogging အောင်မြင်မှုအကြောင်းပြောသောအခါ။ အကယ်၍ သင်မအောင်မြင်ပါကပိပက္ခသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကသင့်ကိုနားထောင်မည်နည်း။ ငါ feeds အရေအတွက်ကိုတင်ပြီးငါ့ Technorati ရာထူးနဲ့အခြားအချက်အလက်တွေကိုနောက်ဆုံးပေါ်ထားပေးတယ်
၂၀၀၀ Blogger Gaming Technorati? Waaaaah!
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကို Z-List တွင်ခဏတာဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လူသိနည်းလွန်းသောဘလော့ဂါများစာရင်းကိုသူတို့၏လက်ရာများတွင်အလွန်ကြိုးစား။ ဘလော့စ်နှင့် ၀ က်ဘ်ပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးမှုတိုးများလာခဲ့သည်။ ရာပေါင်းများစွာသောဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Technorati နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Search Engine နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရာထူးကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ အထွတ်အထိပ်ရောက်နေချိန်တွင် A-lister Seth Godin ကို blogging ပြုလုပ်ခြင်းသည်၎င်းအကြောင်းကိုအချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီးပြောဆိုခဲ့သည်။ အသစ်